Xildhibaano ku dhawaaqay ka shaqeynta Doorasho qof iyo Cod ah | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xildhibaano ku dhawaaqay ka shaqeynta Doorasho qof iyo Cod ah
Xildhibaano ku dhawaaqay ka shaqeynta Doorasho qof iyo Cod ah
By Radio Dalsan Reporter on Aug 3, 2020
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xalay kulan ku yeeshay In ka badan 50 Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, iyagoo kulanka dib la hadlay warbaahinta.
Inta uu socday kulanka Xildhibaanda ayaa waxaa looga hadlay midnimada Golaha Shacabka, xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha Doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan 2020/2021.
Mid kamid ah Xildhibaanada oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay inay ka shaqeynayaan Badbaadinta Masiirka Ummadda Soomaaliyeed iyo sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen kalsoonida shacabka.
Waxaa uu sheegay Xildhibaankaas in ay ka shaqeyn doonaan in dalka Soomaaliya la gaarsiiyo sidii ay uga qabsoomi laheyd Doorasho qof iyo Cod ah, isla markaana ay Go’aan ku gaareen ka shaqeynta midnimada Golaha Shacabka iyo samata bixinta shacabka.
Xildhibaanadii xalay kulanka yeeshay ayaa waxaa ay dhamaantood shaaciyeen inay sidii socon doonaan kulamada looga hadlayo Arrimaha Doorashooyinka dalka, iyagoo tilmaamay in kulamada ay kusoo biiri doonaan Xildhibaano kale.
Maqaal horeXildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulmaya
Maqaal XigaDowladda oo Amaro dul-dhigtay dadka Dalka ka dhoofaya iyo kuwa Imaanaya